के काठमाडौमा कडा लकडाउन हुन्छ ? मन्त्री खतिवडाले पारे स्पष्ट « Etajakhabar
के काठमाडौमा कडा लकडाउन हुन्छ ? मन्त्री खतिवडाले पारे स्पष्ट
काठमाडौ । बढ्दो कोभिड संक्रमणको अवस्थालाई लिएर सर्वसाधारणमा लकडाउन हुने हो की भन्ने आशंका उब्जिएको छ । उपत्यकाका तीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुले स्मार्ट लकडाउनको नीति अवलम्बन गर्दै सुरक्षित तरिकाले दैनिकीका काम गर्न आग्रह गरेका छन् । सर्वसाधारणका लागि केही नियम लागू गरिएका छन् । तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री विरोध खतिवडाले सरकार अनावश्यक ‘लकडाउन’ गर्ने पक्षमा नरहेको बताएका छन् ।